Momba anay - Linyi Juda Science and Technology Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
Linyi Juda science sy teknolojia fiarovana ny tontolo iainana injeniera co., Ltd. dia orinasa manana 30 taona 'tantara, indrindra mirotsaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sokay sokay, lafaoro lafaoro fitaovana fanohanana, fiarovana ny tontolo iainana fitaovana fanesorana vovoka sy ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy, sns.
Ny orinasanay dia nahazo ny fahatokisan'ny ankamaroan'ny mpanjifa tamin'ny alàlan'ny rafitra famolavolana tonga lafatra, vokatra fototra tena tsara, fahaiza-manao matanjaka sy fanamboarana, kalitaon'ny injeniera azo antoka, serivisy avo lenta ary fahombiazana tsara. Ho fanampin'izany, ny orinasa dia manana tanjaka ara-teknika matanjaka, miaraka amina vondrona iray tena avara-pianarana amin'ny famolavolana ny lafaoro sy ny fanamboarana, ny fametrahana ny fitaovana mekanika, ny debugging ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny lafiny hafa amin'ny fahazoana lalina ny injeniera sy ny mpiasa teknika.
Manome serivisy feno izahay manomboka amin'ny famolavolana drafitra ankapobeny, fananganana tetik'asa, famolavolana fitaovana mekanika ary famokarana, hatramin'ny fametrahana ny rafitra fanaraha-maso simika mandeha ho azy, ny fametrahana sy ny fanendrena eo an-toerana, ny fiofanana momba ny mpiasa teknika ary koa ny fikojakojana ny fitaovana.
Miorina amin'ny fampivoarana ny tombotsoantsika amin'ny tsipika famokarana sokay, dia mazoto mitondra teknolojia avo lenta izahay ary namolavola fomba kilasy sokay vaovao toy ny lafaoro misy gazy toy ny solika. Miaraka amin'ny fivoarana ara-toekarena manerantany, dia mihamaro ny fanjakana mihamitombo ny fampiasam-bola. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia ampiasaintsika tanteraka ny fanararaotana mety. Izahay dia mandinika bebe kokoa ny fanatsarana teknika famokarana sokay haingana, ary manandrana ny faran'izay mety ho vitantsika mba hanana fivoarana lehibe amin'ny fanovana ara-teknika, fanavaozana ary fanatsarana ny kalitaon'ny teknika famokarana; ary izahay rehetra dia vonona hanolotra ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao fitaovana sy teknolojia ary serivisy tsara. Hatramin'ny niorenany dia mino izahay fa ny fiainana dia fiainana ary ny mpanjifa dia Andriamanitra. Izahay dia manizingizina ny hanome ny mpanjifanay kalitao tsara, vidiny antonony ary serivisy tsara. Ary ny teknikan'ny famokarana ataontsika dia ampidirina amin'ny firenena mihoatra ny 10. Izahay dia hikiry hanamboatra vokatra tena tsara, manolotra serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra ho an'ny mpanjifa rehetra toy ny mahazatra.
Tongasoa tsara ireo mpanjifa na any an-trano na any ivelany hitsidika ny orinasanay!
Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Anaran'ny varotra calcium oxide, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Manao Hydroxide Kalsioma, Famoronana Hydroxide Kalsioma,